Wasiirka arimaha gudaha iyo Amniga ee Maamulka Maakhir oo ka hadlay xaalada ha Amaan ee Gobolka | maakhir.com
Wasiirka arimaha gudaha iyo Amniga ee Maamulka Maakhir oo ka hadlay xaalada ha Amaan ee Gobolka
December 24, 2007 in General
Dhahar:- Wasiirka wasaarada rimaha gudaha iyo Aminga ee Maamulka Maakhir ayaa ka hadlay Amaanka guud ee Gobolka waxana uu sheegay inuu amaanku meel wanaagsan marayo ayna dhamaan hawl galaan lamaaha kala gadisan ee sugid Amaanka,kuwaasi oo ka hortaga wax alaale wixii amaanka hoos u dhimiya.
Wasiirka arimaha gudaha iyo Aminiga ee Maamulka Maakhir Axmed Xuseen Yuusf (Doonyaale) ayaa goor dhawayd saaxafada kula hadlay Magaalada Dhahar ee xarunta Gobolka Booxaaro waxana uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo Amaanka Gobolada ay ka arimiso Maamulka Goboleedka Makhir si meesha looga saaro wax alaale wixii amaanka Hoos u dhimiya.
Doonyaale waxa uu rajo fiican ka muujiyay Amaanka mandaqada oo uu sheegay inuu meel fiican marayo oo ay dhamaan shaqeeyaan dadkii loo qoondeeyay inay ka hortagaan amaan darada,isaga oo sheegay inay soo kordhiyeen dhawaan qorshe cusub oo ah in la dar dar galiyo tababarida laamaha Amaanka ee Maamulka Makhir kuwaasi oo dhawaan tababar looga furayo caasimada Maamulka ee Badhan.
Doonyaale Gebagebadii waxa uu sheegay inay lagama maarmaan noqotay in ciidamo lagu kordhiyo Magaalooyinka Badhan iyo Dhahar kuwaasi oo loo qoondeeyay ciidamo gaadhaya 50 Askari oo dheeraad ah oo lagu soo kordhiyay kuwii halkaasi horay u joogay.
Magaalada Dhahar waxa lagu soo kordhiyay 15- Askari oo si gaar ah ula shaqeeya Maayarka Degmada, halka Magaalada Badhan ee caasimaha ahna lagu soo biiriyay 35- Askari oo iyana si gaar ah ula shaqeeya Duqa Degmada Badhameed.
Doonyaal ayaa haatan ku sugan magaalada Dhahar halkaasi oo uu kulamo dheeraad ah kula leeyahay waxgaradka deegaanka.
« Maamulka Puntland oo sheegay inay waajib tahay in Budhcada Haysata Wariyaha Aaajinbka la siiyo lacagta ay dalbadeen
Baarlamaanka Puntland oo maanta yeeshya kal fadhigoodi caadiga ahaa »